प्रभु साहलाई विष्णु रिजालको प्रश्न-... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
प्रभु साहलाई विष्णु रिजालको प्रश्न- काशी तिवारीको फाइल खोल्न लागेको हो?
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमन्डल पुनर्गठन गरेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र असन्तुष्टि पनि देखिएका छन्। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष प्रभु साहले ‘लेनदेनकै आधारमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको’ स्टाटस राखेपछि जवाफ दिँदै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले हावादारी कुरा नगर्न आग्रह गरेका छन्।
साहले बिहीबार फेसबुकमा ‘कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्तत: गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो। मन्त्री हटाउँदा वा राख्दा सामान्य कम्युनिष्ट मूल्य मान्यता पनि लागू भएको देखिएन। योग्यहरूलाई हटाउने र अयोग्यलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको महान् कार्यले हामी फेरि एकचोटी लज्जित भएका छौं’ लेखेपछि रिजालले जवाफ दिएका हुन्।
रिजालले फेसबुकबाटै दिएको जवाफमा, ‘पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा २ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष प्रभु साहको यो स्टाटस देख्दा लाज लागेको छ। मन्त्रीका लागि अपेक्षा गर्नु वा दौडधुप गर्नु एउटा कुरा हो। तर, निर्णय भइसकेपछि ‘लेनदेनकै आधारमा’ गरेको भन्नु आपत्तिजनक छ। कसैले उहाँसँग यति ‘लेनदेन’ गरेपछि मन्त्री बनाइदिन्छु भनेको थियो भने बेग्लै कुरा, नत्र यति हावादारी कुरा कसरी गर्न मिल्छ?’ लेखेका छन्।
साथै उनले हावादारी कुरा गर्नेलाई अनुशासनको कारबाही गर्नु जरूरी भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘पार्टीको अनुशासन आयोग भर्खरै बनेको छ। यस्ता अराजक र अनुशासनहीन अभिव्यक्तिप्रति ध्यान जान जरूरी छ। अँ, साच्चै काशी तिवारी हत्याकाण्डको फ़ाइल पनि खुल्न लागेको हो र? सभामुखमाथि त निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने सरकार र पार्टी नेतृत्वले कसैमाथि ढाकछोप गर्दैन है,’ रिजालले भनेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरूद्ध तत्कालीन माओवादीले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन आमहड्ताल जारी थियो। २०६७ साल वैशाख १८ बाट सुरू हड्ताल २३ गतेसम्म पुग्दा धेरै जिल्लामा प्रतिकार सुरू भइसकेको थियो।
त्यसैदिन वीरगञ्ज एकाएक चर्चामा आयो। हिन्दु यूवा संघका कार्यकर्ताले वैशाख २३ गते बिहान माओवादी आमहड्ताल प्रतिकार गरेपछि वीरगञ्ज तातेको थियो। माओवादीको प्रदर्शनस्थल घन्टाघर घेरेर संघका कार्यकर्ताले आक्रमण गर्न थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्‍यो। त्यसक्रममा प्रभु साहसहित ६४ माओवादी कार्यकर्ता घाइते भएका थिए।
माओवादीविरूद्ध प्रतिकार गर्ने समूहको नेतृत्व गरेका थिए, काशी तिवारीले। हिन्दुवादी नेता तिवारीको माओवादी प्रदर्शनमा प्रतिकार गरेको दुई महिना नपुग्दै २०६७ असार १२ गते गोली हानी हत्या गरिएको थियो।
साहको योजनामा तिवारीको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँछ। तर, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मुद्दा लैजान नमानेपछि साह तिवारी हत्याकाण्डमा जोगिएका थिए।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर ५, २०७६, ०३:५९:००
असामान्य समयको सामान्य बजेटमा के छ?
भाजपा सांसद स्वामी भन्छन्- भारतीय कूटनीतिज्ञले नेपाली समकक्षीसँग मीठो भाषा बोल्नुपर्छ